चिन्तन चौतारी: May 2010
माया लाउन एक्लै मैले, जिएँ उनकै यादमा ।
बिछोड भुल्न आसुँ पनि, पिएँ उनकै यादमा ।
तिमी हाँसे मै हाँसुला, भन्दै छाडि गए पनि
अतितमा च्याटेको मन, सिएँ उनकै यादमा ।
हात थियो साथ थियो, एकै थियो बाटो पनि
आफ्नै बाटो खोज्ने विश्वाश, लिएँ उनकै यादमा ।
बाचाहरु झुठा बनाइ, उनी चोखो भए पनि
बियोगको जीवन मेरो, दिएँ उनकै यादमा ।
अचेल सङ्लो मुल भाछु, एउटा खोलो सुके पनि
हिजो-अस्ति धुमिल दल झै, थिएँ उनकै यादमा ।
Posted by Chandra Magar at 12:56:00 PM 1 comment:
रुदै रुदै भेट्यौं हामी रुदै रुदै छुट्यौं पनि ।
हाँसिखुशी बस्यौं हामी पल पल लुट्यौं पनि ।
धरतीको दुई कुना टाढा टाढा भएर 'नि
दुई मन दुई मुटु एकै ठाउँ जुट्यौं पनि ।
बिचार र भावनाले बेस्सरी नै कस्सेपछी
भित्रभित्रै अकारण निकै जोडले फुट्यौं पनि ।
जीवन् जिउन जीवनकै वाचा कसम् गर्यौं हामी
हराभरा पल्लव् मुना टुप्पोबाटै थुट्यौं पनि ।
यात्रा पुरा गर्न एउटा बिन्दुलाइ ताकेकाथ्यौं
बिसाउने निहु गरी धेरै बेर सुत्यौं पनि ।
अजम्बरी प्रेम जोडी बन्ने लक्ष्य बिर्सिएर
निमोठेर सपनालाई नराम्ररी भुट्यौं पनि ।
केही बेरमै टुहि जाने मायाजाल सफल् पार्न
आँखा चिम्ली निधारमा चुट्नसम्म चुट्यौं पनि ।
Posted by Chandra Magar at 8:37:00 AM 1 comment:
तिमीसँग चोखो नाता, गाँस्नु मेरो जीत ठानें ।
तिमी सँगै सधैं बाँच्नु, हाँस्नु मेरो जीत ठानें ।
समीपमा भेटें जब सुकोमल निष्छल् भाव
मन्का सारा अबिश्वास, नास्नु मेरो जीत ठानें ।
पिरतिमा समर्पणको हृदय साक्षी पाएँ पछि
तिखो तिखो काँडाहरु, मास्नु मेरो जीत ठानें ।
अन्धकारलाई हटाएर उज्यालोको पर्खाइमा
बिहानीमा भालेसँगै, बास्नु मेरो जीत ठानें ।
अनगिन्ती दुनियाँको असंख्य यो भिड्मा पनि
नयनमा तिम्रै रुप, टाँस्नु मेरो जीत ठानें ।
Posted by Chandra Magar at 8:21:00 PM3comments:
Posted by Chandra Magar at 8:41:00 PM4comments:
Posted by Chandra Magar at 1:29:00 PM 1 comment:
नेपाली हौं, एकताको माला उन्न थालौं ।
मलिलो छ मातृभूमी, फूल रोप्न थालौं ।
जनताको आँखा कान भाषणले नछेकिदेउ
गरीबको छाक काटी बिलासमा नबसिदेउ
कुर्सी छाड, मोह त्याग, राष्ट्र बाहक बन
ब्यक्ति होइन, पार्टी होइन, राजनेता बन ।
सिमानाको सुरुक्षामा सैनिकलाई पठाऔ
जनधनको रक्षा गर्न प्रहरीलाई खटाऔ
संबिधान लेख्न सभासद सदनमा बस
मिलिजुली जनता देश बिकासमा जुट ।
छिमेकीले हाम्रो भुमि चोर्ने दाउ गरिरा'छ
युद्धबिमान नेपाली आकाशमाथि उडिरा'छ
अखण्डित राष्ट्रियता हस्तक्षेपले टुट्नसक्छ
स्वाभिमान सार्वभौम स्वतन्त्रता गुम्नसक्छ ।
Posted by Chandra Magar at 10:22:00 PM 1 comment:
अब हुरी चल्नेछ ।
प्रकृतिको नियम नै हो
सजीवताको प्रमाण पनि ।
तर प्रकृति कैलेकाही
भयन्कर बनेर आउछ
सजीवताको भिन्न रुप धारण गरेर ।
एक्कासी बादल खेरिएर
आकाश गजधम्म दाकेपछी
चट्याङ र बर्षाले एकैचोटि
सन्त्रास ल्याएको थियो रे!
रोगको महामारी मात्र नभएर
भोक र शोकले हाहाकार मच्चाएको थियो रे ।
सलहहरुले भुइलाई छोपेर
धर्तिभरी रजाई गर्दा
अचानक दिउसै रात परेको थियो
लगत्तै खडेरीले अनिकाल ल्यायो
बाँच्नलाई मान्छे र जन्तुहरु
सिस्नोको जरो उधिनिरहेको देख्थें ।
यद्धपी,धेरै पटक भने
बादल मडारिन नपाउदै
सलहहरुले घाम नछेक्दै
लगातार चलेको हुरिले
बादल र सलहलाई उडाएर
आकाश छ्याँग खोलेको थियो ।
अस्ती परेको मौसमी झरिले
पातका धुलोहरु पुछिदिदा
बातावरण निकै खुलेको थियो
बतासले बुदो रुखहरु दालेको थियो
नौरङी इन्द्रेणी प्रकट भएकी थिइन
नयाँ बिरुवाहरु पलाए र सप्रिए पनि ।
यताउती नियाल्दा आज
दुर्घन्धको आभास गरेको थिएँ
बादल जम्मा हुँदै गरेको थियो
केही सलहहरु सल्बलाउदै थिएँ
कतै प्राकृतिक अनिकाल, महामारी
वा कुनै अनिष्टको पूर्वसंकेत त होइन!?
आशा छ मलाई
यो हावा, यो हुरी
यो चट्याङ, यो झरी
तिनै सलहहरु भगाउनलाई हो
त्यो कालो बादल फटाउनलाई हो
भीषण बर्षा र हुरी पश्चात
वरीपरिका कसिङरलाई हटाएर
फोहोरका डङुरलाई बगाएर
स्वच्छ बातावरण छर्लंङ खुलाउनलाई हो
अहिले हावा चल्दैछ
अव फेरी बेस्सरी उस्तै हुरी चल्नेछ ।
२९ अप्रिल, २०१०
Posted by Chandra Magar at 9:53:00 PM 1 comment: